Wasiirka Bartlett wuxuu mashruuc buuxa ku soo celinayaa warshadaha dalxiiska illaa Oktoobar 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Wasiirka Bartlett wuxuu mashruuc buuxa ku soo celinayaa warshadaha dalxiiska illaa Oktoobar 2021
Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • saaciday inay • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska Jamaica Hon. Edmund Bartlett wuxuu yiri isagoo ku saleynaya saadaasha hada jirta inuu rajeynayo soo celinta buuxda ee warshadaha dalxiiska ee Jamaica inta udhaxeysa Ogosto iyo October ee sanadkan. Tani wuxuu sheegay inay ku tiirsan tahay maaraynta COVID-19 iyo boqolkiiba dadka ku tallaalay jasiiradda oo dhan.
Dib u soo celinta warshadaha dalxiiska ee Jamaica waxay kuxirantahay heerarka talaalka ee sare ee dadka.
Wasiirka Dalxiiska Hon. Edmund Bartlett ayaa ku dhawaaqay ku hadalka af-hayeenka websaydhka 'JMMB'.
Bartlett wuxuu sheegay in wada-hawlgalayaasha dalxiiska dalku ay hadda u tartamayaan xoogaa inay dib ugu laabtaan biyaha Caribbean-ka.
Wasiirka ayaa cadeeyay inta lagu gudajiray JMMB "Webinar Leadership Thought": dhawaanahan, halkaas oo uu kahadlay afhayeenka.
“Saaxiibbadayada markabka dalxiiska waxay hadda u tartamayaan xoogaa inay dib ugu laabtaan biyaha Caribbean-ka. Si kastaba ha noqotee, inta ay le'eg tahay diyaargarowgeena, marka laga eego aragtida maareynta COVID-19, ayaa go'aamin doonta sida ugu dhakhsaha badan ee ay ku soo galaan. heerarka tallaalka oo aad u hooseeya. Waxaan u baahanahay inaan dhisno taas oo aan isku mashquulinno meel aan ku aragno dadka si aad ah loo tallaalay iyo inay si siman ugu dhex socdaan, ”ayay tiri Bartlett.
Wasiirka ayaa ku adkaystay in iyadoo lagu saleynayo saadaasha hadda jirta, jasiiraddu aysan arki doonin soo noqoshada buuxda ee doonyaha illaa dhammaadka Ogast ilaa Oktoobar ee 2021.
“Waxaan u maleynayaa in Ogosto ilaa Oktoobar daaqadaas saddexda bilood ah ay noqon doonto marka aad arki doontid dib u bilaabashada markabkii doonta. Waxaan arki karnaa hal ama laba markab oo yaryar oo soo galaya, laga yaabee bisha Ogos. Si kastaba ha noqotee, qaadashadeyda arrintu waa Oktoobar waxay ila tahay aniga bisha ugu dambeysa ee aan ku aragno dalxiis ku soo laabanaya gobolka. Haddii aynaan wakhtigaas dib u helin, waxaan la kulmi doonnaa dhibaato, ”ayuu yiri Wasiirka.
Wasaaradda Dalxiiska waxay si firfircoon uga shaqeyneysay soo noqoshada markab dalxiis xagaagan, iyadoo adeegsaneysa hanaan iskaashi oo u keeni doona qiimo weyn rakaabka, khadadka dalxiiska iyo Ujeedada Jamaica.
Dhowr meelood ayaa lagu baaray wadahadal lala yeeshay shuraakada dalxiis ee jasiiradda, oo ay ku jiraan isku xirnaansho macno leh, dejinta guriga, wicitaano badan, shaqooyin kordhay, qiimaha kororka ee sumadaha maxalliga ah iyo hagaajinta khibradda rakaabka, taas oo u tarjumeysa qarash badan qofkiiba.